Fanatanterahana ny fanafahana an’i Kaavan, ilay elefanta manirery indrindra manerantany · Global Voices teny Malagasy
Hafindra tsy ho ela any amin'ny toerana masina any Kambôdza i Kaavan
Voadika ny 14 Janoary 2021 5:23 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Italiano, Español, Nederlands, polski, Ελληνικά, 日本語, English
Elefanta ao amin'ny valan-javaboary ao Pakistan. Sary tao amin'ny Wikipedia avy amin'i Mfawadazhar. CC BY-SA 4.0
Voahiboka tao amin'ny valan-javaboarin'i Marghazar ao Islamabad efa nandritra ny telopolo taona mahery i Kaavan, ilay elefanta aziatika tokana ao Pakistan.
Efa ela ireo mpikatroka mpiaro ny zon'ny biby no nitaraina tamin'ny fampijaliana nahazo ilay elefanta ary nanomboka fanentanana hanavotana an'i Kaavan tao amin'ny valan-javaboary tamin'ny taona 2015 izay notohanan'ilay kintan'ny pop Cher. Tamin'ny volana Mey 2020, nanapa-kevitra hamindra toerana an'i Kavaan avy ao Islamabad ho any amin'ny toerana masina mendrika azy ny Fitsarana Avo Islamabad.
Tamin'ny taona 1985, nataon'ny governemanta Sri Lankey fanomezana ho an'i Pakistan i Kaavan, izay mbola kely, mba hanamafisana ny fifandraisana teo amin'ny firenena roa tonta. Tamin'ny taona 1990, nahazo namana nantsoina hoe Saheli izay avy any Bangladesh i Kavaan. Maty i Saheli tamin'ny taona 2012, ka nahatonga an'i Kaavan ho “elefanta manirery indrindra“. Nanomboka hita fa nalaina, ketraka ary naherisetra taty aoriana, ka nahatonga ireo mpiambina hamatotra azy.
Nisioka ilay mpanao gazety Kasim Abbasi hoe:
Nambara fa ‘elefanta manirery indrindra’ manerantany i Kavaan, tao amin'ny gazety The Guardian.
Ny tolona lava nanafahana an'i Kaavan
Tamin'ny taona 2015, nandefa fanangonan-tsonia an-tserasera ny mpianatra iray antsoina hoe Samar Khan mba hanesorana ireo rojovy an'i Kaavan ary nanasongadinana ny fampijaliana ilay elefanta sy ny fitokana-moniny. Nanokatra pejy Facebook mitondra ny anarana hoe “ Afaho i Kaavan Ilay Elefanta ” ihany koa i Khan mba hizarana vaovao momba ny fahorian'ilay elefanta.
Nanao fanentanana hamotsorana an'i Kaavan i Cher tamin'ny alàlan'ny orina mpanasoa natsangany Free The Wild, izay mikendry ny hiaro ny bibidia voahaza.
Tamin'ny volana Jolay 2020, tamin'ny fivoriana vonjy maika nataon'ny Filankevi-pitantanana ny Bibidia ao Islamabad (IWMB), ny governemanta Pakistaney dia nanolo-kevitra ny hamindra toerana an'i Kaavan avy any Islamabad ho any amin'ny Toerana Masina ho an'ny Bibidia Kambodziana, izay hihaonany amin'ny karazam-biby matevin-koditra miisa 80 hafa ary hahazo fikarakarana avy amin'ny manam-pahaizana momba ny bibidia.
Hatao miaraka amin'ny fanampian'ny Four Paws International, fikambanana Aostraliana misahana ny fiarovana ny biby izay nanohana ny fanavotana ireo biby mihoatra ny 30 tao amin'ny valan-javaboary tao Pakistan ny famindrana toerana.
Efa namboarina niaraka tamin'ny fanohanan'ny Free The Wild ny kaontenera hitaterana an'i Kaavan ho any Kambodza ary voaravaka asakanto nentim-paharazana.
TOMPOKOLAHY SY TOMPOKOVAVY ! NY KAOTENERA HITATITRA AN'I KAAVAN.
Fanantenana ho an'ny biby hafa ao amin'ny valan-javaboary Marghazar
Tamin'ny 22 Mey, nanome baiko ny IWMB hamindra toerana ny biby rehetra ao amin'ny valan-javaboary Marghazar ho any amin'ny toerana masina, anisan'izany i Kaavan ny Fitsarana Avo Islamabad (IHC).
Namoaka didy ny fitsarana avo hamindrana ny biby sy vorona rehetra miisa 800 ho any amin'ny toerana masina tsirairay avy
Efa namono liona, aotirisy, antilopa, zebra sy biby maro hafa nandritra ny fisamborana azy na nandritra ny fitaterana ny tsy fahombiazan'ny mpitantana ny valan-javaboary ao Islamabad sy ny filankevitra misahana ny bibidia
Amin'ireo biby sy vorona miisa 917 tao amin'ny valan-javaboary, 513 no very nandritra ny famindrana toerana azy ireo ary folo hafa no maty, anisan'izany ny liona roa izay maty rehefa avy nifoka setroka izay nataon'ny mpikarakara azy ireo hampitahorana azy ireo. Tafafindran'ny IWMB toerana soamantsara ny ambiny.
Handeha ho any Jordania ihany i Bablo sy Suzie.
Efa nivoaka ny fahazoan-dàlana amin'ny fanondranana
Tonga tany Pakistan tamin'ny volana Aogositra 2020 ireo manam-pahaizana avy amin'ny Four Paws, ary nanomboka tamin'izay no nikarakara an'i Kaavan ilay dokotera Egyptiana Amir Khalil, talen'ny Four Paws, namolaka azy, nihira ho azy ary niara-nilalao taminy. Rehefa nanombatombana ny zavatra niainana tao Marghazar i Khalil dia nilaza izany ho mampidi-doza ho an'ireo biby ary nitarika fanentanana ho an'ny famindrana toerana azy ireo.
🐘Kavaan to be moved to a sanctuary in Cambodia within a month. The Cambodian government on Friday issued a permit for the transfer of Kavaan from the Islamabad zoo to a local sanctuaryhttps://t.co/Ue26wpNnwi pic.twitter.com/UtGBQ7iwMW
Avotra i Kaavan niaraka tamin'ny famoahan'i Kambodza ny fahazoan-dàlana hamindra toerana azy
Hafindra any amin'ny toerana masina any Kambodza ao anatin'ny iray volana i 🐘Kavaan. Namoaka fahazoan-dàlana hamindrana an'i Kavaan avy ao amin'ny valan-javaboary Islamabad mankany amin'ny toerana masina eo an-toerana ny governemanta Kambodziana tamin'ny zoma
Efa niasa hatry ny ela ireo mpikatroka mpiaro ny biby any Pakistan hanatsara ny fepetra iainan'ny biby ao amin'ny valan-javaboary, sy mba hampitsahatra ny famonoana alika sy ireo karazana herisetra hafa. Hoy i Faryal Haque, mpikatroka ny zon'ny biby avy any Islamabad, tamin'ny Global Voices:
Velona indray i Kaavan noho ny Four Paws sy ny ezak'i Dr Amir Khalil. Lasa mpinamana be izy ireo. Saingy mampalahelo anefa ny fomba hitazomana ireo biby ao amin'ny valan-javaboary ao Islamabad. Fotoana hamaranana ireo valan-javaboary ireo izao ary hirosoana mankany amin'ny valan-javaboary nomerika sy hamelana ny biby honina any amin'ny fonenany voajanahary.
27 Avrily 2012Amerika Latina